Puntland oo gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-shabaab oo la galay… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-shabaab oo la galay…
Dagaal u dhexeeyay Ciidanka Maamulka Puntland ee PSF iyo Al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa uu ka dhacay buuraleyda Gobolka Bari, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Taliska Ciidanka PSF ayaa sheegay in dagaalkaas dhacay uu ka dambeeyay, kadib markii xubno ka tirsan Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen habeen hore Xabsiga weyn ee Magaalada Boosaaso, ayna kala baxeen Maxaabiis badan oo ku xirnaa.
Qoraalka kasoo baxay Taliska Ciidanka PSF ayaa waxaa marka hore lagu sheegay in Ciidanka amniga Puntland ay gacanta kusoo dhigeen maxaabistii Al-shabaab iyo Daacish kala baxeen Xabisga Boosaaso, isla markaana dib loogu celiyay xabsiga.
Sidoo kale Saraakiisha PSF ayaa tilmaamay in dagaalkii ka dhacay shalay buuraleyda Gobolka Bari Al-shabaab looga dilay in ka badan 20 xubnood, halka 4 kalena laga qabtay, waa sida hadalka loo dhigay.
“Ciidanka PSF waxay u mahadcelinaya ciidamada Kale ee Puntland oo ka garab diriray intii ay soo afjaridu socotay. Shacabka waxaan ugu baqaynaa in Ciidanku diyaar u yahay naftooda in ay kor dhigaan kana badbaadiyaan cadowga Shacabka Soomaliyeed” ayaa lagu yiri Qoraalka Taliska PSF.
Si kastaba Al-shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday habeen hore Xabsiga weyn ee Magaalada Boosaaso eev Xarunta Gobolka Bari, waxaana weerarka ka dhashay khasaaro kala duwan, sidoo kalena ay halkaas kala baxeen maxaabiis farabadan.
Taliska Booliska oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay Qaraxii Luul Yemeni
Turkiga oo War kasoo saartay weerarkii Al-shabaab ee Luul Yemeni